optical ဖန် annealing မီးဖိုထဲ
လီသီယမ် manganate roller မီးဖိုထဲ
တစ်ခုတည်းသောအပေါက်ကို double တွန်းအားပေးပန်းကန်အလတ်စားအပူချိန်မီးဖိုထဲ
18 မီတာအပြည့်အဝအလိုအလျှောက်တစ်ခုတည်းအပေါက်ကို double တွန်းအားပေးပန်းကန်လျှပ်စစ်လညျးမီးဖို
ကြေးနီချွတ်ထုတ်လုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါကယင်း၏ကျဇယားတိုးတက်လာဖို့က annealing မှခေါင်းလောင်းမီးဖိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ပုံမှန်အတိုင်းခေါင်းလောင်းအိုးမီးဖိုအခြေစိုက်စခန်း, အတွင်းအဖုံး, အပူပေးအဖုံးများနှင့်အအေးအဖုံးပါဝင်သည်။ ကြေးနီချွတ်အပူအဖုံးများနှင့်ထားရှိမည်နွေးအတွက်အပူပြီးနောက်, အပူအဖုံးကြေးနီချွတ်အအေးဖယ်ရှားခြင်းနှင့် install လုပ်ထားသည်။ အပြင်, ခေါင်းလောင်းအမျိုးအစားမီးဖိုထဲနေဆဲအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, အသုံးပြုမှုနှင့်အားသာချက်များကိုအများကြီးရှိပါတယ်, Jiangsu qianjin ပိုက်ကွန်ကိုမိတ်ဆွေများကိုအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်!
အမျိုးအစားမီးဖိုကျယ်ပြန့်ကြွေထည်များတွင်အသုံးပြုသည်ခေါင်းလောင်း, သတ္တုဗေဒ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ဖန်, ဓာတု, စက်ပစ္စည်း, ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းများ, အထူးပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်း, တက္ကသိုလ်များ, သုတေသနဌာန, စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ, ကြွေ sintering, မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့နောက်ကျော sintering မြင့်မားသောအပူချိန် roasting ပါဘူး စသည်တို့ကိုစမ်းသပ်မှု, ပစ္စည်းများ processing မြင့်မားသောအပူချိန် sintering လေထု, ကြွေကော်, flue ဓာတ်ငွေ့ကုသမှု sintering ၏ပထမဆုံးရှေးခယျြမှု, annealing,
အပူပစ္စည်းမီးဖိုထဲခေါင်းလောင်းအိုးအားလုံး mosaic နှင့်အတူခေါက်စူပါအလင်းကြွေဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းကျောက်ချစခန်းဖွဲ့စည်းပုံကိုလြှို့ဝှကျ type ကိုမူလီကိုအသုံးပြုသည်, အထူးကျန်ကြွင်းခွက်နှင့်ခုံးတံဆိပ်ကိုမအက်ကွဲခေါင်မိုးကျဆုံးခြင်းမီးဖိုထဲနေကြတယ်, တံဆိပျကိုကောငျးမှ corundum mullite သောကျောက်ရဲ့အရည်အသွေးဖြစ်စေသောစပါးကိုရွေးချယ်ပါ အဆိုပါတိုးမြှင့်ထောက်ခံမှု, bearing ၏အောက်ခြေတွင် corundum mullite ပြွန် embedded ပန်းကန်မီးလောင်ရာ, ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်တားဆီး SAG မီးလောင်စားပွဲပေါ်မှာလည်းမီးလောင်ဝံပန်းကန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသည်းခံနိုင်, ဘာသာပြန်ချက်, အဆင်ပြေတင်နှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ခြေလှမ်း-Down ၏ချမီးရှို့ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်, တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးချမှတ် အလုပ်သမားများရွေးချယ်မှုများလေကောင်းလေ preheating စနစ်၏လုပ်အားပြင်းထန်မှု, ဒါမှမဟုတ်ကော်စနစ်၏စုတ်ယူခြင်းလိုင်း။
လညျးမီးဖို sintering မီးဖိုထဲခေါင်းလောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးအားသာချက်မီးဖိုထဲခေါင်းလောင်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံအလုပ်လုပ်တဲ့ယူနစ်ပုံစံသည်၎င်း၏အကျိုးရှိစွာက၎င်း၏အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ၏အဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အပြည့်အဝ ferrite စက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျနီးပါးအနုပညာခေါင်းလောင်းသိုလှောင်မှုမီးဖိုနှင့်ဖောက်သည်အဆိုအရနိုင်ပါတယ် အပူချိန်မဆိုကွေးရေးလေထု, ဒီဖောက်သည်အပြင်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်လည်းပေးပို့အချိန်ကိုအတိုကောက်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများမဖြစ်မနေ sintering ၏ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်ဒါသည်အတိုင်း, အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီကာလ၌မဆိုအခြားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဖို့လိုအပ်မှ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်အလွန်ကောင်းသော Adjustments ရှိကောငျး ferrite ထုတ်လုပ်သူသံလိုက်ကျော် 1000 အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်သက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရ market.that နည်းလမ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့, တွေ့ကြံ အားလုံး syst မီးဖိုထဲထပ်ခေါင်းလောင်း၏မြင့်တိ၏စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်ဤလိုအပ်ချက်ကို၏ဖောက်သည်ရဲ့အထူးလိုအပ်ချက် em အရည်အသွေးမြင့် core ကို၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းလောင်းအမျိုးအစားမီးဖိုထဲမရှိဘဲအားလုံး ferrite ထုတ်လုပ်သူဟာ ferrite စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လညျးမီးဖို၏စံဖြစ်လာသည်လညျးမီးဖိုအဓိကအားဖြင့်အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနှင့်မြင့်မားသော mu တန်ဖိုးကို ferrite, အထူးသဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည်ထားပါတယ် impossible.only အနည်းငယ်ဖြစ်ပါသည် အော်ပရေတာခေါင်းလောင်းအိုးမီးဖို၏ sintering အတွက်လိုအပ်နေပါသည် sintering ညအချိန်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်စဉ်တင်ချပါဝါရှားပါးမှု၏လက်ရှိအခြေအနေအောက်တွင်အလွန်လက်တွေ့ကျဖြစ်သည့်အာဏာကိုအထွတ်အထိပ်ညှိနှိုင်းမှု, သဘောပေါက်, နေ့အချိန်၌ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
Jiangsu qianjin ထုတ်လုပ်ခေါင်းလောင်းအမျိုးအစားမီးဖိုထဲ
ခေါင်းလောင်းအိုးမီးဖိုအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျင်မြန်စွာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကြောင့် recouped နိုင်ပါသည်။ အပူချိန်နှင့်လေထုထိန်းချုပ်မှု, မှိုက်၌မီးဖိုဒီဇိုင်းနှင့် Airflow ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးဿုံထုတ်ကုန်အပူနှင့်အအေးအပူချိန်တူညီနေမှုသေချာစေရန်ပေါင်းစပ်နေကြသည်။ အေးကာလအတွင်းမီးဖိုထဲလေထု၏ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုက်ရိုက်မီးဖို၏အပူချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့် 0,005% ၏အောက်စီဂျင်အကြောင်းအရာသေချာသို့မဟုတ်ပင်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်မပွုနိုငျရဲ့အရာတစ်ခုခုသော။
ရောထွေးအက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့စနစ်ကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံ input ကို system ကိုကျေးဇူးတင်သည်ရှည်လျားသော sintering ဖြစ်စဉ်ကိုအလွယ်တကူထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန်ပုံတူကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအခါ, ဒီကိုလည်းထုတ်ကုန်အရည်အသွေးဟာရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းအိုးမီးဖို၏အသုံးပြုမှုကျယ်ပြန့်သည် ဖြစ်. , အားသာချက်ထူးချွန်ဖြစ်ပါသည်, လိုအပ်ချက်ရှိကြောင်းပိုက်ကွန်မိတျဆှေယုံကြည်မှုနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများဒီလိုမျိုးမီးဖိုထဲခေါင်းလောင်းအိုးမိတ်ဆက်ပေးနိုငျသညျ, သင်တို့ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ပြဿနာဖြေရှင်းကူညီပေးရန် Jiangsu qianjin ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်!
Jiangsu qianjin စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမီးဖို, ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းနှင့်အထူးကြွေအတူတကွပေါင်းစပ်ထားတဲ့ high-tech လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ရောင်းအားတန်ဖိုးကို RMB 150 သန်းထက်ကျော်လွန်, fixed ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာက 22 အလုပ်အကိုင်ပါဝင်သည်ထားတဲ့ 56 သန်း 150 န်ထမ်း RMB ...